1) Manana tanjona mazava momba ny harato tariby - inona ny fampiasanao ilay harato tariby. 2) Iza amin'ireo tariby tianao no tianao? Black Annealed Wire-mora volavolaina, tanjaka fihenjanana lehibe, mora harafesina. Hot natobaka nandrisika Wire-mamiratra sy tsara tarehy, fiarovana avo indrindra amin'ny harafesina. Electro-nandrisika -...
AHOANA NO HANAOMPO ANAO NY SENATRA AO AMIN'NY HALAKELAKA?
Misy karazany maro ny fampiasana tariby akoho. Maromaro kokoa noho ny mety antenainao izany. Ny iray amin'ireo fampiasana tsy manam-paharoa indrindra dia ny famolavolana ny hexagonal netting ho faribolana sokitra. I Ivan Lovatt, mpanao sary sokitra avy any Aostralia, dia namorona fanangonana zava-kanto mahavariana. Mampiasa akoho galvanis ...
FOMBA FOMBA FIVAROTANA FITSIPANA VOAFITRA GALVANIZY
Ny iray amin'ireo safidy faran'izay tiana indrindra amin'ny resaka fencing, ny rohy makarakara zinc nopetahany savony dia nisaina ho rafitra fencing mety. Ireo fefy ireo dia vita amin'ny tariby vita amin'ny vy. Izy io dia nijanona ho safidy nisafidy teo amin'ny olona nandritra ny am-polony taona maro raha ny amin'ny vahaolana momba ny fefy. Ity t ...
ARAHABAINA AMIN'NY FAITRA CANTON FA-121
Hanatrika ny fampirantiana China Import and Export (Canton Fair) (15 apr. Hatramin'ny 19 apr.) Any Guangzhou ho toy ny exhibitor izahay. Tianay ny manasa anao hitsidika ny booth (15.4C24) amin'ny foara ho avy. Tena ankasitrahana ny fanatrehanao! Hoentinay any amin'ny foara f ...
Ry mpanjifa malala, hanatrika ny INTERNATIONALE EISENWARENMESSE KOLN 2018 izahay (4 martsa ka hatramin'ny 7 martsa) any Cologne, Alemana ho fampirantiana. Tianay ny manasa anao hitsidika ny booth (Hall 3.1, D-081) amin'ny foara ho avy. Tena ankasitrahana ny fanatrehanao! Hoentinay ny kalitao vao nohavaozina ...